Famaritana manokana: Ahoana ny fomba hanoratanao pejy momba ahy | Martech Zone
Famaritana manokana: Ahoana no fanoratana pejy momba ahy
Talata, Aprily 19, 2016 Douglas Karr
Andrew Wise dia nanoratra lahatsoratra lalina tokoa ao amin'ny Ny fomba farany fitarihana amin'ny fananganana pejy momba ahy fa tokony handeha hijery amin'ny antsipiriany ianao. Miaraka amin'ilay lahatsoratra dia namorona infografika zarainay eto ambany izahay izay manarona ny feo sy ny feo, ny fanokafana ny fanambarana, ny toetrany, ny mpihaino kendrena ary ny filàna hafa.
Tiako ny manampy ny 2 cents-ko amin'ireo zavatra ireo, ka izao no mandeha. Tena hamporisika anao amin'ny maha-orinasa na amin'ny maha-olona anao aho, handeha lavitra any ivelan'ny faritra misy anao. Fantatro fa be loatra ny olona izay tsy tia miresaka ny tenany, tsy tia ny sary nalaina ho azy, ary manambany horonan-tsary na feo momba azy. Angamba mino mihitsy aza izy ireo fa manafintohina io fomba fanao io. Matetika aho mahita fanamarihana toy izany amin'ny media sosialy.
Ity ny valinteniko: Tsy ho anao ny pejinao Momba ahy!
Ny selfie, horonantsary miteny, sary matihanina ary famaritana momba anao dia ho an'ny mpihaino anao. Raha olona mahatalanjona ianao ary manetry tena… ny anao Momba ahy pejy tokony hisaintsaina an'izany. Mazava ho azy, hafahafa ny fahatsapana ny fampahafantarana amin'ny rehetra fa manetry tena ianao. Fa raha manetry tena ianao, ahoana no hahafantaran'ny olona? Hiandry ve ianao hihaona tsirairay amin'ny olona tsirairay mba hahitan'izy ireo ny fanetren-tenanao? Sa miandry ny hafa hiresaka amin'ny fanetren-tenao? Tsy hitranga izany.
Raha ny tanjonao dia ny manangana fahefana sy fitarihana eo amin'ny toeranao, ny manavaka anao tsara indrindra dia ianao. Tsy voatery hoe fanabeazana anao, ny tantaram-piasanao fa ianao! Ampahafantarinao ny rehetra ny antony tokony hiara-miasa aminao. Tian'ny olona ny miara-miasa amin'ny olona te hiara-miasa aminy. Ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia matetika mampihetsi-po ary ny fanapahan-kevitra dia miankina amin'ny fahatokisan'ny fanantenanao anao sy hahafantarana anao ho fahefana ao anatin'ny asanao.
Ny fanomezana ny mpampiasa motera fikarohana sy ny mpitsidika tranokala ny laharana rehetra ilainy - ny kabary nataonao, ny mpitarika izay ifaneraseranao, ny boky nosoratanao, ary na ny hafatra manokana ho azy ireo aza dia tena ilaina.
Fanamarihana: meloka koa aho! Notaritariko nandritra ny taona maro ny tongotro tamin'ny fananganana pejy natokana ho an'ny tranonkalanay momba ny fiteniko… fa ity torohevitra avy amin'i Andrew ity dia mandrisika ahy hamita azy!
Tags: momba ahymomba ny pejyandrew hendrymarika manokanapejy manokana
Ahoana no hanovan'ny teknolojia fanontana 3D ny ho avintsika
Maodely maimaimpoana mailaka mamaly amin'ny finday avy any Litmus
Apr 22, 2016 ao amin'ny 4: PM PM
Tena tsara izany.
Ho an'ireo izay misalasala amin'ny famoahana ny fialamboliny sy ny zavatra mahaliana azy ireo satria tsy te hiseho ho tsy matihanina izy ireo, hoy aho izao:
Tsy ny maha-matihanina izany fa ny dinamika ao anaty vondrona sy ivelan'ny vondrona.
Raha mahita ny ivelan'ny vondrona misy azy ny mpamaky anao dia hanana toetra ratsy kokoa aminao izy ireo.
Amin'ny famoahana sombintsombiny kely amin'ny fiainanao, toy ny fananana zanaka, fihazakazahana, ny fitiavanao sakafo meksikana dia hifindra any amin'ny vondrona misy anao ianao izay hahitan'ny olona anao amin'ny jiro tsara kokoa.
Toy ny effets halo io.
Apr 25, 2016 amin'ny 4: 59 AM
Raha ny fahitako ny vahaolana tsara indrindra dia ny fanehoana ny tenanao ho olona matoky tena. Tian'ny olona ny manao orinasa miaraka amina mpandraharaha hendry, kolontsaina ary manao ny marina.
7 Mey 2017 tamin'ny 9:42 hariva
Nanidy raharaham-barotra maro aho mifototra amin'ny fampifandraisana mifototra amin'ny fizarana trano fisakafoanana tiako indrindra amin'ireo mpanjifa mety ho tonga.